Prapta: Ihe obula na ndu di ebe a | Martech Zone
Prapta: Ihe niile dị na ndụ bụ ebe a
Saturday, April 21, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Akwụkwọ nkwado mbụ m nyere bụ maka Prapta, a ịkparịta ụka n'socialntanet na ebe nrụọrụ weebụ na-ekwu "Ihe niile na ndụ dị ebe a!" Ha nwekwara ike ịbụ ndị mbụ nwere ike ịsị "Ihe niile na ịkparịta ụka n'Socialntanet na Web 2.0 dị ebe a!" Ndị a na-arụsi ọrụ ike maka ọrụ!
Site na teknụzụ, teknụzụ dị n'azụ Prapta enweghị ihe pụrụ iche. Saịtị bụ 100% Ajax. Nzukọ, Blog na mmemme ndị ọzọ dị gburugburu Ahụmahụ Ndụ na netwọkụ. Ọ bụ ezigbo ihe dị mma na ịkparịta ụka n'socialntanet… kama m, mụ, m ma ọ bụ gị, gị, gị, Prapta dị n’etiti “anyị”. Ha chịkọtara ozi niile dị na ngwa ahụ ahụmahụ.
Ekwenyere m na lekwasịrị afọ otu maka Prapta bụ ma eleghị anya ndị toro eto (Adị m agadi ịnụ ụtọ ahụmịhe dịka mkparịta ụka Absinthe dị n'okpuru! :).
Enwekwara njin siri ike nke na acho ọ bụla ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị. Cheedị banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ọ nwere blọọgụ, mkparịta ụka, ahụmịhe ndụ, izi ozi ozugbo, wijetị na nkata n'ịntanetị (nkata na-abịa n'oge adịghị anya) ma ị nwere Prapta! Ọ bụrụ na m gbara ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị, m ga-eme ihe n'eziokwu na-ama jijiji na akpụkpọ ụkwụ m na ngwọta dị ka nke a.
Ihe niile dị na nyocha enweghị ike ịma mma, ọ bụ ezie? Agbanyeghị na ngwa ahụ gbara ọsọ (ọ mere n'ezie - enweghị m nsogbu ọ bụla), echere m na enwere nnukwu ohere maka mmelite na ọdịdị nke ngwa ahụ. IMHO, Web 2.0 abụghị naanị banyere ihu Ajax, ọ bụkwa ihe dị mfe na ịdị mfe iji.
Akara maka Prapta bụ ajị ajị na uni-akụkụ. Akara ahụ bụkwa nke kwụ ọtọ mgbe interface ahụ kachasị dịkarịshị elu ka ọ na-adịghị mma. Ihe niile dị na ihuenyo bụ ụda olu, enweghị akụkụ, gradients, ma ọ bụ onyinyo. Aghọtara m na akụkụ nke a bụ n'ihi ikike ịhazi ibe ahụ mana ọ na-ahapụ ngwa ahụ ntakịrị ewepụ (akara ezubere).
M ga-adụ ọdụ ihu okwu siri ike karịa nke nhọrọ nhazi nke ugbu a… na-ekwe ka ndị mmadụ gbanwee ihe niile karia ịsị font, font-size na ibe agba. Web 2.0 bụ maka ịkọwapụta onwe gị - nke a bụ ihe na-eme ka netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ ewu ewu. Nakwa, ụfọdụ mpaghara ntinye ego jupụtara ma ọ bụghị ihe nchọgharị. Dịka ọmụmaatụ font na ịkpụzi agba adịghị enye m ọrụ n'ụzọ ziri ezi:
Nke ahụ kwuru, m ga-enye Prapta ọkwa kachasị elu enwere ike nyere ikike nke ngwa ahụ ọ bụghị ọkaibe. Nke a bụ ọrụ dị egwu na ndị mmepe kwesịrị nnukwu otuto! Otu ulo oru mbo ke akwa graphic omenka nwetara na web ngwa ga-ụgbọala a ngwa n'ime mainstream na-ewu ewu. Echere m n'eziokwu na ọ bụ naanị ihe kpatara na anụghị m Prapta tupu!
Ndụmọdụ ikpeazụ: Ọ dịghị mkpa ịkwalite azịza ya dịka Ajax ma ọ bụ Web 2.0. Ndị mmadụ agaghị eji ngwa gị maka ebumnuche ndị a. Na-akwado saịtị ahụ maka ihe ọ bụ - ebe dị egwu iji kesaa ahụmịhe, tụlee ha, ma chọta ndị ọzọ!
Lekwasị anya na API iji too ngwa gị (Del.icio.us na Technorati)